I-Methenolone Acetate (Primobolan) powder (434-05-9) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Methenolone powder Series / I-Methenolone i-Acetate (Primobolan) ipowder
SKU: 434-05-9. iindidi: I-Methenolone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Methenolone Acetat (Primobolan) powder (434-05-9), phantsi kommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Methenolone Acetate (Primobolan) ividiyo ye powder
I-Methenolone Acetate (Primobolan) ebomvu
igama: I-Methenolone Acetate (Primobolan) powder
Ukusetyenziswa kompometone we-Methenolone (Primobolan) kwipiliti ye-steroids
I-methenolone I-acetate powder nayo iyazi njengePrimobolan powder (i-CAS 434-05-9), i-Primo A, i-Primo Ace.
Ukusetyenziswa kweProdbolan powder
I-methenolone I-acetate powder kufuneka ikhutshwe. Kwindoda, isiqalo ngokuqhelekileyo sithatha i-50-100mg ngosuku, Umsebenzisi ophakathi uthabatha iXXUMUMX-100mg ngosuku, umsebenzisi ophezulu usebenzisa i-150-150mg ngosuku, angabi ngaphezu kwee-200-6 iiveki, Kubafundi besifazane, ngokuqhelekileyo i-8-25mg okanye i-50 -50mg ngosuku.Akubakho ngaphezu kweeyure ze-75-4,
Isilumkiso kwiProw Primobolan powder
Nangona i-steroid emnene, imiphumo emibi ye-Methenolone i-Acetate powder ingabandakanyeka ukusabela okunamandla, kunye ne-androgenic. Iimpembelelo zeAndrogenic ziquka i-acne, ukulahleka kweenwele ngokukhawuleza kwizinto ezibhekiselele kwindoda yesimo somzimba kunye nokukhula kweenwele zomzimba.
Kwakhona zibandakanya imiba ye-cholesterol, njengokunyuka kwe-LDL ye-cholesterol, ngokukodwa ukukhutshwa kwe-cholesterol ye-HDL okanye ukunciphisa.
Ngaphezu koko, zonke i-anabolic steroids zinyusa ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo Nangona ikhupha umgangatho we-testosterone yemveliso, i-Methenolone i-Acetate powder (i-CAS 434-05-9) inqanaba lokunciphisa ayinamandla kunabantwana abaninzi be-anabolic steroids.
Kwinkalo yezokwelapha, i-Methenolone Acetate powder isetyenziselwa ukuphatha abantu abajongene nezimo apho ukutshabalalisa imisipha kunye nokulahlekelwa kwesisindo esinzima kuyimpawu. Ezinye izinto ziquka: i-immunostimulant kubantu abalwa nokusuleleka, ukuchithwa kweemeko, ukulungelelanisa ukuchasana nemiphumo ye-corticosteroid yexesha elide kunye nokunyanga kwe-osteoporosis kunye ne-sarcopenia (ukulahleka kwemisipha ehambelana nokuguga). I-Methenolone i-Acetate powder, efana ne-Anavar, ebonakaliswe ukuba yomelele kwimiphumo yaso emibi eye isetyenziselwa kubantwana kunye neentsana ukwenzela ukukhuthaza ukuzuza ubunzima kwiintsana ezizalwe ngaphambi kokuba zingekho izibonakaliso zeziphumo ezibi okanye utyhefu  . Omnye unokukwazi ukubona ngokukhawuleza ukuba ukukhwabanisa kwe-anabolic steroid livela ngaphakathi kwintlalo yezemidlalo kunye nokwakha umzimba, njengoko kuboniswe ngumbonakalo obonakalisa iziphumo ezinobuthakathaka kunye ne-orrogenic ezincinane.
I-Methenolone Acetate Powder (CAS 434-05-9)
I-Methenolone ephakamileyo ye-Acetate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Methenolone i-Acetate powder (i-CAS 434-05-9), uthenge i-Primobolan powder esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubunyulu 98% I-Methenolone i-Acetate ipowder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iibhabhi zangaphantsi ekusebenziseni ngomlomo.
I-Methenolone I-Acetate powder Iidlaphu zokuPhepha
I-Primobolan powder - i-steroid yokusika kakhulu